အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Albert Poliakoff - ဝီကီပီးဒီးယား
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Albert Poliakoff
၁ ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Albert Poliakoff !
၃ File:ULA-AA Flag.svg
၄ SVG Flag request
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Albert Poliakoff ![ပြင်ဆင်ရန်]
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၀၇:၃၂၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
You have recently created two articles that I noticed, which are ယိုဟန် ပက်ချယ်ဘဲလ် and ဘက်ရှ်မိသားစု. In the former article, you begin the lead with these words, "ယိုဟန် ပက်ချယ်ဘဲလ် (အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်: (Johann Pachelbel) ယိုဟန် ပက်ခဲလ်ဘဲလ်၊ လက်တင်: Johannes Pachelbelius Organista Noriberghensium) သည် ..." and instead of using the current title name, "ယိုဟန် ပက်ချယ်ဘဲလ်", the other name you put "ယိုဟန် ပက်ခဲလ်ဘဲလ်" would be more close to its German pronunciation (ဂျာမန် အသံထွက်: [ˈpaxɛlbəl], [ˈpaxəlbɛl], or [paˈxɛlbəl]). The latter article ဘက်ရှ်မိသားစု has the second name you added (ဘာ့ခ်), which is more preferable and more approximate to Deustache or English pronunciation (RP: /bɑːx/ or /bɑːk/, De:/baχ/ ) so the article name should be ဘာ့ခ်မိသားစု in place of ဘက်ရှ်မိသားစု, which I believed both German & English people never pronounce (ရှ်, sh) for Bach . Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၀၇:၂၂၊ ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thank you for your suggestion. I also have known about the German and English pronunciation (which is why I added in brackets). But, the Burmese pronunciation can be different from German and English pronunciation. That's why, for the main title, I used what the Burmese people would read those names, and as well as adding the approximate pronunciation of the names.
As examples, Beethoven, in Burmese language, is written as "ဘီသိုဗင်", instead of "ဘေသိုဗင်" and Mozart as "မိုးဇက်", instead of "မိုးဇာ့ထ်". This is why my article titles are written in Burmese approximation. Albert Poliakoff (ဆွေးနွေး) ၀၈:၀၀၊ ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Resonable! I’m not here now to discuss that but just to say your articles concerning music are really nice & admirable, which I feel are filling in the blanks for Myanmar Wikipedia. Bravo! Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၁၂:၁၁၊ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
I appreciate your admiration on my new music articles. Western music and early music composers are not explored much in Myanmar's music community and I think that it is worth knowingabit about them. Even though I'm notacertified musician, I am trying my best in making articles about music and music theory, openinganew knowledge door for Burmemse Wikipedia readers, and as you said "filling in the blanks in Myanmar Wikipedia" Albert Poliakoff (ဆွေးနွေး) ၁၂:၄၄၊ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
FYI ပါ အစ်ကို။ Commons မှာတင်ခဲ့ဖူးတဲ့ File:Arakan Army Flag.png ဖိုင်ကို No evidence of ownership or permission to release ဆိုပြီး ဖျက်ခံရဖူးပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၀၁၊ ၂၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ File:Arakan Army Flag.png က source image ကို တိုက်ရိုက်ကြီး တင်ထားလို့ထင်ပါတယ်။ အခုဖိုင်က ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Inkscape နဲ့ vector ပုံစံလုပ်ထားတာပါ။ Albert Poliakoff (မက်ဆေ့ခ်ျ) ၀၃:၂၄၊ ၂၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
SVG Flag request[ပြင်ဆင်ရန်]
ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် နဲ့ ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (Chin National Defense Force) ဆောင်းပါးတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ သူတို့ရဲ့အလံကို SVG ဆွဲပေးဖို့ အဆင်ပြေမလားဗျ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၄၂၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ကျွန်တော်ကိုယ်၌က ပုံတွေကို Detail ကျကျမဆွဲတတ်တာရယ် အခုလျှပ်စစ်မီးအရမ်းပျက်နေတာကြောင့်ရယ် လုပ်ပေးဖို့ အဆင်သိပ်ပြေမယ်မထင်ပါ။ အဆင်ပြေရင်တော့ လုပ်ကြည့်ပေးပါမယ်။ Commons မှာ jpg နဲ့ အလံပုံတစ်ပုံရှိတယ်ထင်တယ်။ (File:Chin National Organization - Flag.jpg) Albert Poliakoff (မက်ဆေ့ခ်ျ) ၀၃:၅၄၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ။ ကျနော်လဲ ခုနကပဲ ကွန်မွန်းစ်က ပုံကို တွေ့တယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၀၄၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Ninjastrikers Here, (File:CNO-CNDF Flag.svg)Albert Poliakoff (မက်ဆေ့ခ်ျ) ၁၂:၄၉၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thanks and Cheer! Ninja✮Strikers «☎» ၀၆:၅၀၊ ၁၃ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Albert_Poliakoff&oldid=737514" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၆:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။